Korodh: Dhis Khariidadda Suuqgeynta Internetka Aakhirka | Martech Zone
Waxaan nahay taageerayaal waaweyn oo muujinaya tilmaamayaasha waxqabadka muuqaalka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan u shaqeynaa warbixinnada billaha ah ee fulinta macaamiisheenna, xafiiskeenna gudahiisa, waxaan leenahay shaashad ballaaran oo muujineysa dashboard-waqtiga dhabta ah ee dhammaan tilmaamayaasha waxqabadka suuqgeynta internetka ee macaamiisheena. Waxay ahayd aalad aad u wanaagsan - markasta na ogeysiinaysa macaamiisha ay helayaan natiijooyin sare iyo kuwa fursad u leh horumar.
Inta aan hada isticmaalno Geckoboard, waxaa jira xaddidaadyo dhowr ah oo aan ku soconayno inta aan sii wadno hagaajinta dashboardka, wanaajinno, iyo ku darno macaamiisha. Geckoboard wuxuu leeyahay xulashooyin badan oo widget ah oo fudud oo lagu daro laguna abaabulo dashboardka. Si kastaba ha noqotee, iyagu maahan kuwo aad loo habeyn karo - oo leh xulashooyin xaddidan oo adag.
Grow waxay bixisaa dashboard si buuxda loo habeyn karo oo leh faa'iidooyin dhowr ah:
qiimaynta - Mid kasta oo ka mid ah widget-yada ayaa laga cabbiri karaa cabirrada fudud.
Dharbaaxo - Halkii aad kaheli laheyd ilo madax banaan wijetiga kasta, waxaad ku dahaadhi kartaa ilo xog badan. Markaa qiyaasi is-beddelka iyo dakhliga dul-saaran dusha sare ee taraafikada bogga la bixiyo!
Ilaha xogta - Haddii widget-yada qasacadaysan aysan ku filnayn, waxaad sidoo kale ku dari kartaa ilaha macluumaadkaaga adoo ku xiraya ilaha xogta internetka oo jaantus ku soo saaraan adoo adeegsanaya widget-yada 'Grow'.
Waxaan siinaynaa xoogaa fikir ah inaan horumarino caadada dashboardka suuqgeynta internetka macaamiisheena kasta ka dibna iska wada baabi'inta warbixintayada. In kasta oo ay nooga baahan tahay xoogaa shaqo ah si aan u dhammaystirno ku-meel-gaarnimada, waxaa dhab ahaan jiri lahaa kayd kharash guud ahaan u guuritaanka macaamiisheenna jihadaas. Loomana baahna warbixin - hadda waxaan ku heli lahayn dhammaan xogta waqtiga-dhabta ah.
Wadahadalkayaga aan kula jirno wakiilka Kobaca, xitaa waxaa laga yaabaa inay heystaan ​​ogeysiisyo goor dhow imaan doona barxadda. Taasi waxay noqoneysaa mid aan maskaxda laga laaban karin kala-guurkayaga. Qiyaas in lagugu ogeysiiyo kororka taraafikada ama hoos u dhaca raadadka!
Grow waa habka ugu fudud ee lagu heli karo xogtaada oo aad ugu dhex arki karto shaxda waqtiga dhabta ah. Marka waxqabadka ganacsiga la cabiro waa la horumarin karaa. Iyo kooxaha garanaya natiijada, waxay u ciyaaraan inay guuleystaan!
Waxyaabaha isku dhafan ee hadda jira waxaa ka mid ah Act-on, Amazon Redshift, Amazon S3, Appraisal, Asana, Box, CSV, Custom Rest API, La Taliyaha Lataliyaha, Iskuxiraha Macluumaadka, Dropbox, Facebook, Xayeysiiska Facebook, Buugagta Freshbooks, FTP / SFTP Faylka gelitaanka, Github, Google Adwords , Google Analytics, Spreadsheets Google, Harvest, HP Vertica, Infusionsoft, Insidesales.com, Instagram, Magento, Mailchimp, Marketo, Mixpanel, MongoDB, Mysql, Netsuite, NuoDB, Oracle, PostgreSQL, Quickbooks Online, Shopify, Shipstation, Salesforce, SQL server, Sonkorta CRM, Wada shaqeynta, Twitter, Vertica Database, Xero, Youtube, Buugaagta Zoho, Zoho CRM, iibiyaha dhexe ee Amazon, Amazon S3, Hubspot, Soo noqnoqda, iyo Relate IQ. Microsoft Dynamics CRM ayaa dhowaan soo socota.
Tags: Act-OnRedshift AmazonAmazon s3Iibiyaha Amazon dhexeQiimayntaAsanaBoxLataliyaha ChannelCSVAPI Custom Restomdashboardbarnaamijka dashboardmadal muraayadaIsku xira Databasesanduuqa hoos loo dhigoFacebookxayeysiiska facebookFreshbooksFTP / SFTP gelitaanka FaylkaGitHubgoogle adwordsAnalytics googleWaraaqaha GooglekoraanHarvestHP VerticahubsashoInfusionsoftgudaha.comInstagramtilmaamayaasha waxtarka muhiimka ahmagentomailchimpmuraayada suuq geyntaSuuq geynta barnaamijka dashboardsuuqoMixpanelMongoDBMySQLnetsuiteNuoDBOraclePostgreSQLQuickbooks khadka tooska ahSi isdaba joog ahLa xiriir IQiibinraridadukaankaSQL ServerSonkorta CRMWadashaqaynTwitterMacluumaadka VerticaXeroyoutubeBuugaagta ZohoZoho CRM
5 Kala Goynta Xogta iyo Qiyaasta Suuq Xumida
Sep 13, 2016 at 12: 25 PM
Cajiib! Waad ku mahadsantahay maqaalka weyn. Waxaan haynaa dhowr shirkadood oo suuq geyn ah oo jecel koritaanka. Waxaan jeclaan lahayn inaan tusno qof kasta oo daneynaya demo deg deg ah. http://www.grow.com/bi-demo/